Nhau - Chii Chaunoziva Nezve Electric Drill
Magetsi kudhiraivha muchina wekuchera unoshandisa magetsi sesimba. Icho chigadzirwa chakajairika mune maturusi emagetsi uye chakanyanya kudiwa simba chishandiso chigadzirwa.
Huru magadzirirwo emagetsi ekuboorera ari 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 23, 32, 38, 49mm, nezvimwewo. Idzo nhamba dzinoreva hukuru hwehupamhi hwechibhorani chakakochekerwa pasimbi nesimba rakasimba 390N / mm2. Iyo yakanyanya kuchera dhayamita yeasina-feri simbi, mapurasitiki uye zvimwe zvinhu zvinogona kuve 30-50% yakakura kupfuura iyo yekutanga magadzirirwo.
Kupatsanura & Musiyano
Magetsi ekudhiraivha anogona kuganhurwa muzvikamu zvitatu: magetsi emagetsi edhiraivha, anokanganisa madhiraivha, uye sando drills.
1. Tambanudza chibooreso chemagetsi:Simba idiki, uye chiyero chekushandisa chinogumira pakuchera huni uye sechinhu chemagetsi screwdriver. Mamwe ruoko emagetsi ekuboora anogona kuchinjwa kuita akakosha maturusi zvichienderana nechinangwa. Kune akawanda mabasa uye mamodheru.
2. Impact chibooreso:Iko kunokanganisa mashandiro eakakanganisa kuboora ane maviri marudzi: imbwa zino mhando uye bhora mhando. Bhora-mhando rova ​​chibooreso rinoumbwa chinjwa ndiro, yakatarwa ndiro, simbi bhora uye zvichingodaro. Iyo ndiro inofamba yakabatana neiyo huru shaft netambo, uye ine gumi nemaviri mabhora esimbi; iyo yakagadziriswa ndiro yakagadzikwa pane iyo casing nemapini uye ine mana esimbi mabhora. Pasi pechiito chekukanda, gumi nemaviri mabhora esimbi anotenderera pamwe neayo mana mabhora esimbi. Iyo yakaomeswa carbide chibooreso inogadzira kutenderera kunokanganisa kufamba, uko kunogona kuchera maburi muzvinhu zvinopwanyika zvakadai sezvidhinha, mabhuroko, uye kongiri. Bvisa zvipikiri, gadzira iyo yakagadzika ndiro uye muteveri ndiro kutenderera pamwechete pasina kukanganisa, uye inogona kushandiswa seyakajairika yemagetsi chibooreso.
3. Sando yekuboora (sando yemagetsi): Inogona kuchera maburi mune akasiyana siyana akaomarara zvinhu uye ine yakafararira nzvimbo yekushandisa.
Mitengo yemhando idzi nhatu dzemagetsi dzinodzidziswa dzakarongedzwa kubva pasi kusvika kumusoro, uye mabasa anowedzera zvinoenderana. Sarudzo inoda kusanganiswa nezvikamu zvavo nezvinodiwa.
Musiyano uripo pakati pemagetsi ekuboora, dhiraivha yekukanganisa, sando yekuboora uye kutora magetsi.
Magetsi chibhorani chemaoko chinongovimba nemota kutyaira iyo yekufambisa giya kuti riwedzere simba rebhora, kuitira kuti chibooreso chikwanise kupwanya nesimbi, huni nezvimwe zvinhu.
Kana chibooreso chinoshanda chiri kushanda, pane nzira mbiri dzekugadzirisa pfundo pane chibooreso chuck, chinogadziriswa chibooreso uye chinokanganisa chibooreso. Asi iyo yekukanganisa drill inoshandisa magiya pane yemukati mugodhi kusvetuka kuti uwane iyo yekukanganisa mhedzisiro, uye iyo yekumanikidza simba yakanyanya kuderera pane iyo yemagetsi sando. Iyo inogona zvakare kuboora yakasimbiswa kongiri, asi mhedzisiro haina kunaka.
Sando drills (sando dzemagetsi) dzakasiyana. Ivo vanoshandisa yepazasi mota kutyaira maviri seti egear mamiriro. Imwe seti inoziva kuchera uye imwe inoisa iyo pisitoni, iyo yakafanana neiyo hydraulic sitiroko yeinjini, inogadzira yakasimba simba rekukanganisa. kushanda. Simba rinogona kutsemura matombo nekukamura goridhe.
Sarudzo yemagetsi ndeyekurega mota ichitenderedza mamota ekusvetuka kuti amhanye mune bounce modhi, kuitira kuti kunhonga kuve nemhedzisiro yegouge pasi. Iyo hydraulic pombi piki inoshandisa iyo gasi kumanikidza inopfuudzwa neyemhepo compressor kutyaira iyo pombi sando mune yemagetsi piki kuti ibhure neshure, nekudaro ichigadzira mhedzisiro yesarudzo chisel ichirova pasi, asi iyo yemagetsi inotora chete chisel nemusoro wayo wekutora haitenderi.
Zvese mune zvese, emagetsi madhiraivha anongokwanisa chete kuchera, uye percussion drills inogona zvakare kuve nehana diki yekurova mhedzisiro. Iyo sando yekuboora inogona kuboora uye yakakwira kurovera, nepo iyo yemagetsi pick ndiyo chete yekupwanya uye isingakwanise kudhiraira.